Warshadaha Balastarka ee Shiinaha iyo soo -saareyaasha | SJJ
Balastarka daabacan ee gaarka ah, calaamad ama epaulettes ayaa ku habboon militariga, Boy Scout, koofiyadda, marada iyo dhammaan yunifoomka. Waxaan sidoo kale samayn karnaa dhejiska daabacaadda 3D & dhejiska chenille.
Daabacaaddu waa farshaxan taariikh dheer leh, waxay ahayd saddex kun oo sano oo horumar ah ilaa hadda, laga bilaabo qori-gacmeedkii hore ee gacanta lagu sameeyay illaa hadda mashiinka-baabuur-samaynta la sameeyay. Baahida loo qabo daabacaadda ayaa sidoo kale sii kordheysa maalinba maalinta ka dambeysa, gaar ahaan dhejiska wax lagu xardho ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa militariga, waaxda dab -damiska booliiska, adeegga amniga, waaxda dowladda, naadiga isboortiga & kooxda, lebiska ergada rasmiga ah, qoorta indha -indheeyaha, ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa koofiyadaha iyo bacaha.
Farsamadeena daabacaaddu waxay ka timid Taiwan ilaa 1984, tolmadu aad bay u adag tahay, oo meeriska dhammaadka xuduuddu wuxuu ku dhegan yahay dhabarkiisa oo aad u adag. Waxaan leenahay farshaxan -yahanno iyo farsamo -yaqaanno leh waayo -aragnimo buuxda, waxaan samayn karnaa farshaxanka wax -soo -saarka sida waafaqsan naqshaddaada. Raadi xalka ugu fiican si aad u gaarto naqshaddaada 24 saac gudahood. Markaa na dooro, si fudud oo dhakhso leh u hel naqshaddaada. Warshadeena Dongguan waxay leedahay ilaa 58 mashiin oo horumarsan, hal mashiin ayaa heli kara 20-30pcs isla balastar calaamadeysan oo isku xardhan. Wax -ku -oolnimadan sare ayaa naga caawin karta inaan macaamiisheena u soo bandhigno balastar daabac ah oo raqiis ah. Illaa 12 midab oo ku jira hal balastar, midabbo kala duwan si ay naqshaddaadu u noqoto mid cad.
Waxaan nahay warshad la ansixiyay Disney, warshadda Scout ee la ansixiyay ee Mareykanka, ciidanka Japan, warshadda hawada ee is-difaaca oo la ansixiyay, waxaanna la kaashanay shirkado badan oo dharka summada caanka ah leh. Waa hubaal inaad ku qanci doontid tayadeena. Fadlan ha ka labalabeyn inaad nala soo xiriirto oo aad sameysid balastarro kuu gaar ah.
** Mawduuc: 252 mawduucyada midabka kaydka / dahabka birta ah ee dahabka ah & qalin macdan / midab beddelaya dunta xasaasiga ah ee UV / ku dhalaalaya dunta mugdiga ah
** Asalka: twill/velvet/dareemay/xariir ama maro gaar ah
** Taageerida: Birta, warqadda, balaastigga, Velcro, koolo
** Naqshad: qaab la habeeyay iyo naqshad
** Xuduuda: xadka merrow/xadka laser goynta/xadka kulaylka la gooyey/xadka gacanta la gooyay
** Cabbirka: kartoo
** Bixinta: 3-4 maalmood oo muunad qaadasho ah, 10 maalmood wax soo saarka ballaaran
Hore: Qadaadiicda Ciidanka
Xiga: Lanyards -ka raaxada leh - oo leh jilayaal daadsan ama godan
Patch -ka Badge ee Shiinaha iyo qiimaha Badge ee la daabacay
Meelaha ugu Wanaagsan ee Scout Boy
Shiinaha Best Boy Scout Patches Quotes
Shiinaha Best Boy Scout patches Alaab -qeybiyeyaasha
Meelaha La Xiriirayo ee Custom
Meelaha Lagu Xardhay Caadada Ugu Yar
Balastarka Daabacaadda Habboon
Naqshadaynta Balastarka Daran
Balastarka Logo -ga la isku xardhay
Meelaha Magaca Lagu Xardhay
Balastarka La Xiriira Iibinta